Accueil > Gazetin'ny nosy > Razafintsalama Ihanta: Tsy maty manota ao amin’ny ministeran’ny vola ao mihitsy ?
Razafintsalama Ihanta: Tsy maty manota ao amin’ny ministeran’ny vola ao mihitsy ?
Ahoana ihany ity Tale Jeneralin’ny fitantanam-bolan’ny mpiasampanjakana (Directeur general des gestions financière et personnel de l’Etat) ao anivon’ny ministeran’ny vola, dia Rtoa Razafintsalama Ihanta Sahondra ity e? Tena tsy voafehin’ny minisitry ny vola, Rtoa Vonintsalama Andriambololona, tokoa ve izy io? Izany no manitikitika ny sain’ny mpiasa maro ao anivon’ity ministera ity. Matoa tsy voafehin‘ny minisitra izy dia matoky tena fa manana mpiaro any an-dapa, hoy ny hafa.
Ankehitriny mantsy dia mananika ny dimanjato indray ny olona vao noraisina ho mpiasa manao fifanarahana manokana amin’ny fanjakana (??) ao anatin’ny sokajin’ny “Ecd” eo anivon’ity ministera ity, ka Rtoa Tale Jeneraly Razafintsalama Ihanta no nampiditra azy ireo ao, ary vao tamin’izao taona vaovao izao izany.
Mahalasa fisainana ny tranga toa izany, hoy ny mpiasa maro ao amin’ity ministera ity satria vao herinandro vitsy ange izay no nisehoan’ny fanapahana karama teo amin’ny mpiasampanjakana mananika ny 10.000 nefa dia indro fa nampiditra mpiasa vaovao sahady ity Tale Jeneraly ity. Izy anefa no isan’ny manana dian-tanana tamin’io fanapahana karama io, hoy ny avy eny Antaninarenina.
Ndeha koa anefa horaisina fa ara-dalàna sy ara-drariny izany fampidirana mpiasa ao izany, hoy ihany ireo mpiasa ao, dia nahoana no tsy mba jerena ny momba ny zanak’ireo mpiasa ao, indrindra fa ireo efa hisotro ronono, satria izay no fifampitondrana tao hatrizay. Mba manana tombon-jo hampiditra ny zanany ho isan’ny mpiasa ao ny ray amandreniny izay mpiasa ao nefa efa handeha hisotro ronono na sanatria lasa nodimandry.
Misy moa ny manombana fa mitetika ny toeran’ny minisitry ny vola mihitsy Rtoa Razafintsalama Ihanta, ary efa mandavaka any an-dapa any izy mivady momba izany.